Mourinho oo dhiiragaliyay xidigahiisa kooxda Manchester United, kadib guushii ay ka gaareen Fulham – Gool FM
Mourinho oo dhiiragaliyay xidigahiisa kooxda Manchester United, kadib guushii ay ka gaareen Fulham
(Premier League) 08 Dis 2018. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa ka hadlay sida uu ugu faraxsan yahay guushii ay Manchester United 4-1 kaga gaartay Fulham kulankoodii 16-aad ee horyaalka Premier League.
Mourinho ayaa xiliyadii lasoo dhaafay la dhibtoonayay guul la’aan, balse kulankii ay maanta la ciyaareen kooxda Fulham waxay sameeyeen bandhig cajiib ah waxayna gaareen guul weyn.
“Ciyaartoyda waxay fahmeen marka aan u baahano 11 ciyaaryahan wada jir ah, in wax tarkeena uu fiicnaan doono”.
“Ciyaartoyda waxay fahmeen kadib kulankii Arsenal, xitaa hadii aanan badinin waan faraxsanahay, waxay doonayeen in isla maskaxdaas ay kulanka maanta ku bilwdaan, marka ciyaartoyda ay bixiyaan wax walba ee awoodoodu tahay dareenka wuxuu noqonayaa mid wanaagsan”.
“Waxaan u baahneyn inaan badino kulanka maanta, wax guuldaro ah ma aanan la kulmin saddexdii kulan ee lasoo dhaafay, hadana sidaasoo ay tahay ma aanan badinin”.
“Haatan waxaan ciyaari doonaa 2 kulan ee ah meel ka baxsan garoonkeena, bal aan aragno hadii aan awoodi karno inaan helno dhibco kale”.
Maxamed Salaax oo Diiday Abaalmarinta Laacibka Kulanka kaddib guushii Bournemouth…( Ogoow sababta )
Safafka rasmiga ah kooxaha Espanyol Vs Barcelona ee kulanka Catalan derby